Kumanaan ajnebi ah oo boliisku doonayo in uu dalka khasab uga saaro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kumanaan ajnebi ah oo boliisku doonayo in uu dalka khasab uga saaro
La daabacay torsdag 7 mars 2013 kl 12.15
Waxaa jira dad badan oo boliisku dalka khasab uga saari doono. Waxaase hadda dalka ku sugan 4000 oo qof oo aan dib loo celin karin. Wargeyska Dagens Nyheter wuxuu qorayaa in dadkaasi ay ku sugan yihiin xaalad dal la’aan ah.
Dowladdu waxay boliiska u xilsaartay hirgelinta masaafurinta khasabka ah. Waxaa hadda jira ilaa 20 000 oo qof oo diidmo laga siiyey codsigoodii magangelyo-doonka oo ay Hay’adda Socdaalku arrintooda ku wareejisay boliiska.
Qiyaastii 12 000 oo ka mid ah dadkaas waxaa lagu hayaa baadigoob, lamana oga meesha ay ku sugan yihiin. Waxaa dhici karta in ay dal kale u dhoofeen, ama dhuumaaleysi ugu sugan yihiin Iswiidhen.
Dowladdu waxay dooneysaa in boliisku dalka khasab uga saaro dadka sharciga loo diiday oo dhuumaaleysiga ku jooga. Waxaa dadkaas badankood loo celinayaa Ciraaq.
Kuwo badan ayaa Iswiidhen ku sugnaa ilaa iyo sannadkii 2008. Kolkaas oo aragtidii xaaladda ammaanka Ciraaq ay wax iska beddeleen, dadkii la siinayey sharciga degganaantuna ay sii yaraadeen. Kumanaan qof ayaa halkaan yimid iyagoo rajeynaya in degganaan la siiyo, laakiin waxaa durbadiiba la siiyey diidmo aysan filanayn.
Iswiidhen iyo Ciraaq waxay kala saxiixdeen heshiis dib-u-celin. Iswiidhen waxay ku doodeysaa in heshiiskaasi yahay mid aan mugdi ku jirin, laakiin wasiirro Ciraaq ah ayaa waxay Iswiidhen ka codsadeen in la joojiyo masaafurinta khasabka ah. Intii muddo ah waxay safaaradda Ciraaq joojisey in ay dokumenntiga safarka siiso dadka khasabka loo masaafurinayo.
Sidoo kale dalalka Iiraan iyo Afqaanistaan dokumeenti ma siin dadka aan dooneyn in ay iskood ugu noqdaan dalkooda. Sidaas waxaa laga soo xigtay boliiska.
Dadka noocaas ah dib looma celin karo, dalkana looma oggola in ay joogaan oo waxay ku sugan yihiin jahawareer. Waxaa warkaan laga soo xigtay Maamulka Qaranka Boliiska.